नेपाली विज्ञापन क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल छ – Rajdhani Daily
नेपाली विज्ञापन क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल छ
नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का पूर्वअध्यक्ष एवं वेलकम एडभरटाइजिङ एन्ड मार्केटिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक निर्मलराज पौडेल आनको स्थापनादेखि नै नेपाली विज्ञापन व्यवसायमा मात्र नभई नेपाली मिडिया जगत्को दीर्घकालीन समुन्नतिका लागि क्रियाशील छन् । विज्ञापन क्षेत्रका विज्ञ पौडेलसँग नेपालको विज्ञापन बजार, यस क्षेत्रका समस्या, चुनौतीलगायतका विषयमा राजधानीका लागि शिव दुवाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन संघ
नेपालमा हाल विज्ञापन व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाली विज्ञापन जगत्को अवस्था एवं संरचना क्रमिक रूपले विकास भइरहेको छ । नेपालका विज्ञापन एजेन्सीको व्यावसायिक विकाससँगै सिर्जनशीलतामा समेत वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । साथै मिडिया र आमसञ्चारमा भएको प्रगतिसँगै विज्ञापन बजार विस्तार हुने क्रममा छ । विश्वव्यापीकरण एवं बढ्दो साक्षरता दरले नेपाली आमउपभोक्ता कुनै पनि वस्तु वा सेवासम्बन्धी सूचनाप्रति सचेत भएका छन् । हाल दैनिक उपभोग्य समानको प्रयोग गर्न विज्ञापनकै भरमा निर्णय लिने प्रचलन, बालबालिकाहरू विज्ञापन हेरेकै भरमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाबारे बढी जानकार हुने आदि क्रियाकलापले विज्ञापनको महŒवलाई दर्साउँछ भने यसले नेपाली विज्ञापन व्यवसायको अवस्थाको समेत जानकारी गराउँछ । विज्ञापनप्रति जनमानसमा बढ्दो चेतनाका कारण विभिन्न उद्योगले विज्ञापनलाई आफ्नो सेवा र वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने सशक्त माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्दै छन् । हाल विज्ञापन बजारमा ५ अर्बबराबरको वार्षिक कारोबार भइरहेको छ । मुलुकमा रोजगारीको अवसरमा कमी आइरहेको अवस्थामा विज्ञापन क्षेत्रले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको छ । हाल विज्ञापन क्षेत्रमा १५–२० हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका छन् । साथै मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकासमा पनि विज्ञापन क्षेत्रको विशेष भूमिका छ ।
पहिले र अहिलेको विज्ञापन बजारमा कस्तो फरक पाउनुभएको छ ?
पहिलेको विज्ञापन जानकारीमूलक मात्र हुन्थ्यो भने सूचना प्रविधिको विकाससँगै विज्ञापन क्षेत्रमा पनि विज्ञापन निर्माण गर्नुभन्दा अघि गरिने बजार अनुसन्धान, सिर्जनात्मक पक्ष, मानव संसाधन एवं नयाँ प्रविधिलाई सबैले आत्मसात् गरिरहेका छन् । साथै विज्ञापन निर्माण गर्दा प्रयोग हुने प्रविधिमा अत्याधुनिक परिवर्तन आएको छ, जसले टिभी प्रिन्ट र आउटडोर क्रियाकलापमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । यथेष्ट पुँजी, उच्चस्तरीय प्रविधि एवं दक्ष जनशक्तिको अभावबाट गुज्रिरहेको नेपाली विज्ञापन व्यवसाय सिर्जना र मौलिकताको नयाँ बाटोमा हिँड्ने जमर्को गरिरहेको छ र यसका लागि सम्पूर्ण विज्ञापन जगत्सँग सम्बन्धित पक्षहरू हातेमालो गरी अघि बढिरहेका छन् । यसैले पनि विज्ञापनका लागि मात्र विज्ञापन गर्ने सतही मानसिकताको अन्त्य भइरहेको छ भने विज्ञापन आफैंमा एक बृहत् व्यावहारिक कला हो भन्ने नयाँ परम्पराको शुभारम्भ भएको छ ।
विज्ञापन बजारको कुरा गर्ने हो भने मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि विज्ञापन उद्योगको आयतन प्रतिवर्ष १०–१५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भइरहेको छ, जुन अत्यन्त सन्तोषजनक अवस्था हो । सम्भवतः सयको हाराहारीबाट सुरु भएको विज्ञापन २०१७ तिर १ हजारको दरले बढ्दै गयो । यद्यपि त्यतिबेलाका कुनै आँकडा आधिकारिक थिएनन्, तर विज्ञापनसम्बन्धी छापिएका विभिन्न लेखलाई तथ्य मान्ने हो भने २०३८ तिर विज्ञापन बजार करोडको हाराहारीमा विस्तार हुँदै गएर २०५० देखि २०५२सम्म आइपुग्दा १ अर्बसम्म पुगेको थियो ।
२०५६ सालदेखि हालसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा नेपाल विज्ञापन संघले गरेको बजार सर्वेक्षणको तथ्यलाई आधार मान्दा उद्योगको वार्षिक कारोबार लगभग ४ अर्ब ८५ करोडबराबर रहेको छ । प्रिन्ट मिडियाको वाषर््िाक कारोबार २ अर्ब २५ करोड छ भने टेलिभिजनको ९५ करोड छ । यसैगरी रेडियोको ७५ करोड, आउटडोर ७० करोड, डिजिटल (हलहरू) र अनलाइन विज्ञापन १५ करोड र केबल स्क्रोलिङ ५ करोडको हाराहारीमा वार्षिक कारोबार हुन्छ ।
सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन व्यवसायीको सम्बन्ध कस्तो छ ?
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा आम सञ्चारमाध्यमलाई टिकाइराख्न विज्ञापन बजारले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ । सिंगो सञ्चार जगत्लाई नै मर्यादित एवं व्यवस्थित पार्ने कार्यमा समेत विज्ञापन बजारले ठूलो महŒव राख्दछ । मिडिया र आम सञ्चारमाध्यमले जनतालाई जुनसुकै विषयबारे जानकारी गराउँछ । यस अर्थमा भन्नुपर्दा सञ्चारमाध्यमको विकास एवं विस्तार मुलुकका लागि राम्रै संकेत हो तर अहिले जुन हिसाबले मिडिया दर्ता प्रक्रिया भइरहेको छ, त्यसले मिडिया क्षेत्र र विज्ञापन बजारमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । जसको फलस्वरूप स्वयं सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन व्यवसायीहरूबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भावना विकास भइरहेको छ । विज्ञापन व्यवसायी र सञ्चारमाध्यमले एकआपसमा सहकार्य गरी अघि बढ्दा दुवै पक्षलाई सकारात्मक फाइदा हुने देखिन्छ ।
क्लिन फिड के हो र यसले नेपाली विज्ञापन बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित सामग्री प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था नै क्लिन फिड हो । अर्थात् बिनाविज्ञापन सामग्री मात्र प्रस्तुत हुने च्यानलहरू क्लिन फिड हुन् । हामीले हेर्ने गरेका विदेशी च्यानलहरू एचबीओ, सिनेम्याक्स आदिमा कार्यक्रम मात्र आउँछन्, विज्ञापन आउँदैनन् । त्यस्ता च्यानललाई क्लिन फिड च्यानल भनिन्छ । क्लिन फिडको महŒव र यसले नेपाली विज्ञापन बजारमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर विगत लामो समयदेखिको निरन्तर प्रयासको फलस्वरूप सरकारले विज्ञापनरहित नीति २०७३ को तर्जुमा गरेको छ, जुन आफैंमा स्वागतयोग्य छ । यस नीतिका प्रमुख उद्देश्यमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूद्वारा प्रसारित विज्ञापनलाई नियमन गर्ने, स्वदेशी विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्ने, विज्ञापनको माध्यमबाट नेपाली भाषा र संस्कृतिमा भएको अतिक्रमण रोक्ने आदि रहेको छ । यस नीतिको सही रूपले कार्यान्वयन भएमा हाल वर्षिक ५ अर्बको हाराहारीमा रहेको विज्ञापन बजार दोब्बरले वृद्धि हुने निश्चित छ साथै विज्ञापन व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू जस्तै उत्पादन गृह, कलाकार, रेकर्डिङ स्टुडियो आदिमा समेत सकारात्मक वृद्धि हुने, विदेशी डबिङ विज्ञापनहरू निरुत्साहित हुने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित विज्ञापनमा मौलिकपना साथै स्थानीय कला, संस्कृति र भाषाको श्रीवृद्धि हुने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरी स्वदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने लगायतका अन्य थुप्रै फाइदा देखिन्छन् । तर विडम्बना आफ्नो निहित स्वार्थका लागि यसका सरोकारवालाहरूले क्लिन फिड नीतिलाई कार्यान्वयन हुन नदिएको अवस्था छ ।
तसर्थ अब हामीले क्लिन फिड र यसका फाइदाबारे आम सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन व्यवसायीहरूमा चेतना फैलाएर यससम्बन्धी भएको निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । यसमा जतिसुकै बाधा आइपरे पनि भविष्यमा हामी यो नीतिलाई लागू गराएरै छाड्न विशेष पहल गर्नेछौं ।
विज्ञापनको क्षेत्रमा छापा र टेलिभिजन मिडियाको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा विज्ञापनको क्षेत्रमा छापा माध्यम अघि छ । यसको मुख्य कारण टेलिभिजनमा स्तरीय कन्टेन्ट नबन्नु र असंख्य रूपमा टिभी च्यानलको दर्ता प्रक्रियामा वृद्धि भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु हो । विज्ञापन व्यवसायीले पैसा तिरेर बजाएको विज्ञापनमा पनि एकमाथि अर्को विज्ञापनले स्क्रिन भरेर टिभी स्क्रिनलाई फोहोर बनाउने काम भइरहेको छ । कार्यक्रममा राम्रो विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि विज्ञापनका लागि होडबाजी हुने क्रमले टिभीको स्तरलाई तल झार्ने काम गरेको छ । यस्तै अवस्था हुने हो र टिभी च्यानलले समयसापेक्ष आफूलाई परिमार्जित गर्दै नलाने हो भने अबका दिनमा सोसियल मिडियाले विशेष स्थान पाउने सम्भावना छ । हालसम्म दर्शकहरूले टिभीको अव्यवस्थित कार्यक्रम र फोहोरी स्क्रिनभन्दा छापा मिडियालाई नै बढी पछ्याउने हुँदा नेपालमा टिभी भन्दा छापा मिडियाको स्थान स्थिर रहेको हो ।
अहिले नेपालमा डिजिटल मार्केटको अवस्था कस्तो छ ?
अहिलेको विज्ञापन बजारलाई हेर्ने हो भने सोसियल मिडियामा प्रस्तुत हुने विज्ञापनहरूलाई निकै चासोका रूपमा हेरिने गरेको अवस्था छ । नेपालमा मात्र ८६ लाखभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता रहेको जानकारी हामीलाई आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि डिजिटल मिडिया हावी भएको अवस्था देखिन्छ । यदि यस्तै क्रम बढ्ने हो भने अबको केही वर्षमा नै डिजिटल र ट्रयाडिसनल मिडिया ५०÷५० को अनुपातमा वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ ।
विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
विज्ञापन बजारलाई अझ मर्यादित र व्यवस्थित गर्न विदेशी डबिङ विज्ञापनहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गइरहेको विज्ञापन एजेन्सी र मिडियाहरूको दर्ता प्रक्रियामा रोक लगाउनुपर्छ । साथै सरकारले आयातीत तथा उत्पादित सम्पूर्ण वस्तुहरूको विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी विभिन्न सुविधा र प्याकेजहरूद्वारा ससाना उद्योगलाई समेत विज्ञापन गर्न पे्ररित गर्नुपर्छ । यसका साथै समयसापेक्ष क्लिन फिडको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । यस्ता क्रियाकलापले विज्ञापन व्यवसायलाई मात्र नभई सिंगो मिडिया जगत्को अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ । विज्ञापनको योजनाबद्ध वृद्धि गरी यसलाई प्रभावकारी पार्न राष्ट्रिय विज्ञापन नीति अपरिहार्य छ । यसो भएको खण्डमा दीर्घकालमा विज्ञापन व्यवसाय अवश्य उद्योगका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल हुनेछ । साथै यसका लागि विज्ञापन चक्रमा आबद्ध सबै साझेदाको सक्रिय सहभागिता, इमानदारिता, सहयोग, सदभाव एवं समर्थनको पनि उत्तिकै खाँचो छ ।
विज्ञापन क्षेत्रको विकासका लागि आनले खेलेको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
नेपाली विज्ञापन क्षेत्रको व्यावसायिक एवं मर्यादित रूपमा विकास गरेर राष्ट्रको समग्र मिडियाको श्रीवृद्धि गर्ने प्रमुख भूमिका नेपाल विज्ञापन संघ आनले निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । दुई दशकभन्दा लामो यात्रामा आनले विभिन्न उतारचढाव र चुनौती पार गरेर शैशवकालमा रहेको विज्ञापन क्षेत्रलाई राष्ट्रकै एक सबल र सुदृढ उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ ।
आनले संरचनागत एवं सांगठनिक रूपमा आफूलाई निरन्तर मजबुत बनाई वास्तवमै नेपाली विज्ञापन व्यवसायको अभिवृद्धिमा कटिबद्ध रहेको छ । आनले नेपाली विज्ञापन क्षेत्रको सिर्जनात्मक एवं व्यावसायिक रूपान्तरणका लागि कृति अवार्ड एवं अन्य व्यावसायिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरूमा सक्रिय रूपमा सम्पादन गरी आफ्नो छविलाई पनि क्रमिक रूपमा परिमार्जन गरिरहेको छ । कृति अवार्ड कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नेपाली विज्ञापनमा सिर्जनशीलता एवं नवीनतालाई प्रोत्साहन गरी समग्र विज्ञापन उद्योगलाई नयाँ गति दिनु हो ।
यस अवार्डको आरम्भले नेपाली विज्ञापन व्यवसायी, विज्ञापनकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सम्बन्धित पक्षहरूमा मौलिकताको महŒवबारे सन्देश प्रवाह गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । साथै स्वदेशी विज्ञापनलाई विदेशी विज्ञापनसँग तुलना गर्दा नेपाली विज्ञापनमा मौलिकता र सिर्जनशीलता छैन भन्ने प्रवृत्ति पनि विस्तारै अन्त्य भइरहेको छ ।
५ अर्बको वार्षिक विज्ञापन कारोबार भइरहेको छ
विज्ञापन उद्योगको आयतन प्रतिवर्ष १०–१५ प्रतिशतले वृद्धि
डिजिटल र परम्परागत मिडिया ५०÷५० को अनुपातमा वृद्धि हुने
उद्यमी, सरकार, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमबीच सहकार्य आवश्यक
पहिले र अहिलेको कृति अवार्डको स्तरीयतामा के फरक छ र यसमा मिडियाको भूमिका कस्तो रह्यो ?
पहिला आयोजना हुने कृति अवार्ड कार्यक्रममा समयको पावन्दी हुन्थ्यो भने कार्यक्रम पूर्ण रूपले मनोरञ्जनात्मक एवं व्यवस्थित हुन्थ्यो । यसपटक भने साढे ४ घण्टाको लामो कार्यक्रममा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू नभएको, एउटालाई बोलाउँदा अर्कै प्रतिनिधि गएर अवार्ड थापेको, कार्यक्रममा एजेन्सीको नामलाई प्राथमिकता नदिइएको र कार्यक्रममा सहभागी नै नभएका एजेन्सीले समेत अवार्ड जितेर गएको पाइयो । यी विविध कारणले मिडिया, एजेन्सी र उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकले कार्यक्रम स्तरीयहीन भएको टिप्पणी गरे । यसमा आयोजकको कमजोरी रहेको हामीलाई पनि महसुस भयो । पहिले पहिले मिडियाले कृति अवार्डलाई आफ्नै इन्डस्ट्रीको उत्सवका रूपमा भव्यतासाथ मनाउने गरेको थियो, जहाँ एउटै छातामुनि सम्पूर्ण एजेन्सीको निष्पक्ष सहभागिता रहन्थ्यो । तर अहिले मिडिया व्यावसायिक भन्दा पनि करकापले उपस्थित भएको र मिडियाले कृति अवार्डलाई विज्ञापन व्यवसायीहरूको कार्यक्रमका रूपमा मात्र लिएको भान भयो । त्यसैगरी कृति अवार्डसम्बन्धी कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण नगर्नु, धेरै च्यानलमा लाइभ नहुनु आदिले समेत हामीलाई निकै दुःखी तुल्याएको छ । आगामी दिनमा मिडियासँग छलफल गरी कार्यक्रमप्रति भएको यस्तो अपरिपक्वतालाई कसरी परिपक्व बनाउने भन्नेतर्फ सदा हाम्रो ध्यानाकर्षण रहनेछ ।
अवार्ड वितरणमा विवाद भएको हो ?
कुनै पनि अवार्ड कार्यक्रममा आफूले अवार्ड नपाएपछि धाँधली भयो भन्ने परम्परा हाम्रो देशमा मात्र होइन, विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि रहँदै आइरहेको छ । नेपाली विज्ञापन क्षेत्रमा सिर्जनशीलताको कदर गरी यो व्यवसायलाई समयसामयिक रूपमा विकसित गर्न कृति अवार्ड कार्यक्रमको आयोजना गरिन्छ । यसमा निर्णायक समिति तथा आयोजकहरूले प्रतिभाको सही मूल्यांकन गरेर उत्कृष्ट एवं दाबेदार प्रतिनिधिलाई समेट्ने गरी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यसपटकको कृति अवार्डमा भने शतप्रतिशत धाँधली भएको भन्ने आरोप लागेको पाइयो । यस विषयमा सम्पूर्ण मिडिया, विज्ञापन एजेन्सी र दर्शकको समेत असन्तुष्टि देख्दा साँच्चिकै ठूलै कमजोरी भएको हो कि भन्ने हामीलाई पनि महसुस भएको छ । यस विषयमा आनको पूर्वअध्यक्ष र कृति अवार्डलाई आजको यस अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउने संरक्षकका हैसियतले यस्ता कमीकमजोरीहरूप्रति सम्बन्धित सबै पदाधिकारी बसेर छलफल गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता कमीकमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्छु ।
नेपालमा विज्ञापन व्यवसायको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
सूचना प्रविधिमा आएका नवीनतम सोच एवं व्यवहारलार्ई विज्ञापन जगत्ले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । आजको चरम प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा आधुनिक उपभोक्ताहरूको मन र मस्तिष्क जित्ने खालको विज्ञापन निर्माणका लागि बजार अनुसन्धान र अन्य उत्पादनको बजार अवस्थाबारे जानकार हुनु आवश्यक छ । यसैगरी विज्ञापन चक्रका उद्यमी, सरकार, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमहरूबीच बलियो सहकार्य एवं समन्वय हुनुपर्छ ।
विज्ञापन जगत्मा सबल मानव संसाधनको विकासका लागि विभिन्न अन्तक्र्रिया, गोष्ठीलगायतका कार्यक्रम गरी यसलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले समेत उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा पनि विज्ञापनसम्बन्धी नीतिनियम तर्जुमा गरी अब यसलाई कसरी अघि लैजाने भन्नेतर्फ गहिरेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि सरकारको समेत ध्यानाकर्षण भएको खण्डमा नेपाली विज्ञापनको भविष्य उज्ज्वल हुने निश्चित छ ।